Ahoana ny fandehanana ny saka | Noti saka
Sary - Wikihow.com
Mieritreritra izahay fa tsy mila mandeha mitsangatsangana ny saka satria rehefa vita ny zava-drehetra dia nanao ny asany tao anaty boaty izy ireo ary manome kilalao azy ireo hampifaliana azy ireo ary, indraindray, manao fanatanjahan-tena kely. Na izany aza, tsy azontsika adino fa biby izy ireo, na dia afaka miaina mandritra ny androm-piainany aza ao anatin'ny trano iray, mila afaka mivoaka tsindraindray hijerena. Amin'ny toetrany izany.
Fa mazava ho azy, rehefa any an-tanàna isika dia misy loza hafa noho ny tombontsoa, ​​noho izany amin'ity tranga ity dia tsara kokoa ny tsy manao risika ary mitazona ny volontsika ao an-trano. Ankehitriny, raha toa ka mipetraka amin'ny tanàna iray isika na afaka miditra amin'ny toerana mangina, dia mamporisika anao aho hitondra izany aminao. Samy hankafizanao roa. Discover ahoana ny fandehanana ny saka.
1 Arovy ny saka
2 Mandeha miaraka amin'ny saka
Arovy ny saka
Rehefa te hampianatra ny volombentsika handeha amin'ny tadidy isika, ny zavatra tsy maintsy tadidintsika dia ny fiarovana azy ireo. Ambonin'izany rehetra izany, inona no tokony hahaliana antsika indrindra. Noho izany, tsy ny volom-borona na ny tendrontany (na izy roa) ihany no hataontsika deworm, fa koa tsy maintsy mividy harness sy leash ahazoana ainas, manokana ho an'ny saka.
Alohan'ny hivoahana any ivelany, tsy maintsy ampiasaintsika amin'ny zatra izy. Araka izany dia apetrakao mandritra ny 10 minitra isan'andro isika, mandra-pahitanao fa tsy mahazo aina intsony izy. Rehefa vitanao izany amin'ny farany, apetaho aminy ny kofehy ary ento mandehandeha eran'ny trano ianao, irery aloha ary avy eo miaraka aminao. Ireo mandeha tsy maintsy ho fohy izy ireo amin'ny voalohany. Afaka halavaina tsikelikely izy ireo.
Mandeha miaraka amin'ny saka
Raha vao mahazo aina sy milamina ianao dia apetraho amin'ny alika volo ny kofehy ary afatory amin'ny faritra mangina (miaraka amin'ny fiara). Raha mametraka azy amin'ny tany ianao dia mampiseho fahalianana, afaka mandeha tongotra kely manodidina ilay faritra ianao, fa raha hitanao fa mitebiteby izy, tsara kokoa raha manandrana indray andro hafa.
Hitombo ny faharetan'ny dia satria efa zatra an'io ny biby, fa tsy tokony hanery na hanery azy hanao zavatra mihitsy isika.
Sary - Petsafe.net
Ny fandehanana miaraka amin'ny saka dia mety ho traikefa nahafinaritra, saingy tokony hatao am-pitoniana sy amin'ny faharetana hatrany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Ahoana ny fandehanana ny saka
Allergie amin'ny saka